Malunga nathi - Jiangxi FuluoEr Medical Instruments Co., Ltd.
JiangXi Folohr Medical Instruments Co., Ltd. (Flor Medical elifutshane) yasekwa ngo-2012 JiangXi Folohr Medical Instruments Co., Ltd. iye egxile R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwezifo ezinganyangekiyo izixhobo zonyango ukususela ekusekweni kwayo ngo-2012; Ngokusekwe kwisiseko semveliso eNanchang, inkampani yamisela iziko le-Nanchang R & D kunye namasebe amiselweyo eBeijing, eShanghai, eChengdu, njl.
Inkampani ikwindawo yeXiaolan yoPhuhliso lwezoQoqosho, kwisiXeko saseNanchang. Isebenze ngokusesikweni ngo-2012. Lishishini lezixhobo zonyango elidibanisa i-R & D, imveliso kunye nentengiso. Inethiwekhi yayo yeshishini igubungela ilizwe liphela, kwaye
Kwaye ithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-30 nakwimimandla efana ne-United States, i-Bhritane, i-France, i-Jamani, i-Russia, i-Japan kunye ne-South Korea.
Umbono ekuqaleni kokusekwa kwenkampani yayikukuba liqela loshishino oluphezulu olunophando lwenzululwazi kunye namandla okwenza izinto ezintsha. Iqela lavula amacandelo aphambili anje ngeswekile yegazi, uxinzelelo lwegazi, ubushushu bomzimba, kunye neatomization yeoksijini. UFlor uhlala kwikomkhulu laseNanchang. Okwangoku, iseke uphando kunye nesiseko sophuhliso e-Nanchang, kwaye ngokulandelelana kuphuhlise inani leemveliso zonyango ezimele.
Ukukhusela impilo yosapho lwethu yeyona njongo iphambili yeshishini lethu, kwaye ukunceda uluntu kunye nokusebenzela abantu yinjongo yeshishini lethu.
Ubungcali, unonophelo, ukuvelisa izinto ezintsha, kunye nophuculo ziingcinga zenkonzo athe uFlor wasoloko ebambelela kuyo; inkampani yethu iya kuhlala ihambelana nezinto ezintsha zetekhnoloji, ijolise kuphando lwemveliso kunye nophuhliso, yomeleza ukuqinisekiswa komgangatho, kwaye ibonelele ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu njengesikhokelo sokukhusela impilo yabantu.